ပြည်တွင်း အင်တာနက်သုံးသူတို့အတွက် အထူးသတင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ပြည်တွင်း အင်တာနက်သုံးသူတို့အတွက် အထူးသတင်း
Posted by ဂျစ်စူ on Dec 6, 2010 in Creative Writing, Know-How, DIY | 18 comments
အခုလိုအသိပေးပြီးရေးသားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် …
key logger အကြောင်းကြားဖူးနေတာကတော့ကြာပြီ..။ သူတို့ အင်တာနက်ကနေလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် တော်တော်တော့ အချိန်ပေးရမယ် ။ အင်တာနက်သုံးစွဲသူဦးရေက တစ်စစမြင့်တက်လာလို့ပါပဲ ။
တစ်ချို့ဆိုင်တွေက task manager ပိတ်ထားတယ်ဗျ… Command Prompt တွေလဲ သုံးလို့မရအောင် ပိတ်ထားတယ်… အဲဒါဆိုရင် key logger ထည့်မထည့် ဘယ်လိုသိနိုင်ဦးမလဲ ခင်ဗျ…
Key logger နောက်တစ်မျိုးရှိပါသေးတယ်။ Task Manager မှာလည်း မတွေ့ပါဘူး။ တခြား ဘယ်နေရာမှမတွေ့ပါဘူး။ Programs file ထဲမှာ လည်း မတွေ့ပါဘူး။ အဲဒါမျိုးဆိုရင်တော့ ကီးဘုတ်ကနေ Ctrl+Alt+Shift+K လေးနှိပ်ပြီးတော့ စမ်းကြည့်ရင် တွေ့နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလို တွေ့ရင်လည်း အဲဒီ ကီးလော့ဂျာက ပိတ်လို့မရပါဘူး ။ ပါတ်စ်ဝါ့ ခံထားတက်ပါတယ်။ အဲဒါမျိုးတွေ့ရင်တော့ ဆိုင်ပြောင်းသုံးဖို့ပဲ တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ..
*ပြီးနောက် keyloggerတွေထဲမှာပင် လျှင် အွန်လိုင်းဝဘ်ပေ့ဂ်ျမှာတင်လို့ရသည့် keyloggerနှင့်hardware keyloggerဆိုပြီးရှိနေပါသေးသည်။ ငှင်းတို့အားသုံးစွဲထားသည့် ကွန်ပျုတာမှဆိုလျှင် taskmanager ခေါ်ပြီး end process ပေးလိုက်လျှင်တောင်မရနိုင်တော့ပါ။*
အဲ့တာကိုဘယ်လို checking လုပ်လို့ရပါသလဲခင်ဗျာ ??
လုံခြုံရေးအတွက် နည်းများကို သတ်ိပေးကြတဲ့ ဘော်ဒါများကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဆရာ့ဆရာတွေရဲ့ Password တောင် Key-logger အသုံးပြုပြီး အခိုးခံရတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေရှိတယ်ဂျ..သတိထားကြပါ..
ဒီကဆရာတွေက Key-Logger တစ်ခုလောက်တာသိကြတာ
အပြင်မှာ Key-logger လို ဆော့ဖ်ဝဲတွေပေါမှပေါပဲဂျာ..
ဂိမ်းဆော့နေတုန်းသုံးသွားတဲ့ Shortcut key ကအစ ပြန်ပြပေးသေးတယ်ဗျာ
Key-logger ဆိုရင်တော့ ဖရားဖရား ပဲ…
ကို Intro အတွက် Taskmgr နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး..သိသလောက်လေးကတော့..ဒီအောက်က အတိုင်းပါပဲဂျာ..။
Manual နည်းတွေအများကြီးရှိတယ်ခင်ဗျ..အနော်လဲ မေ့ကုန်တာနဲ့ ..အကုန်အလွယ်ဖြစ်အောင်တွေ့ တာ ရှာပေးတယ်ဂျာ။လိုချင်တဲ့ဟာကို enable ပေးလိုက်တာနဲ့ ပြန်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် .. Windows control panelTask ManagerStart Menu – RunRegistry ToolsFolder optionsRight click MenuShutdown WindowsLogoff windowsShow Desktop IconsControl Panel – Display optionChange wallpaper 216.87 KB From nyinaymin.comDownload ifile.it ၊ Download mediafire ၊ Download multiupload တစ်လက်စထည်း..မထူးတော့ပါဘူး..Taskmgr နဲ့ ပတ်သတ်ပြီးသိထားတာလေးတွေ..ပြောပြခဲ့မယ်ဂျာ..။Registry ကနေခေါ်မယ်ဆို.ဒီအောက်ကဟာလေးကို ကော်ပီကူးပြီး notepad ထဲဖြည့်.Filename.reg နဲ့ သိမ်း.။ဒါဆို Registry ကနေပိတ်ထားခဲ့တဲ့ Taskmgr ပြန်ရပြီ..။REG Delete HKCU\_Software\_Microsoft\_Windows\_CurrentVersion\_Policies\_System /v DisableTaskMgr /fgpupdateGroup policy ကပိတ်တဲ့ဟာဆို ဒီတိုင်းသွားပြင်Run>gpedit.msc>user configuration အောက်က administrative templates မှာ ရှိတဲ့ system အောက်က Ctr+Alt+Del Option မှာ Remove Task Manager ကို Disable လုပ်ပါ။ ပြီး ရင် Run box ထဲမှာ gpupdate ဆိုပြီး group Policy ကို update လုပ်ပါ။ ok..Group policy ကိုသွားဖို့run box ကိုပိထားသေးရင် ဒီအောက်က Script တွေကို notepad ထဲကူးပြီး..Filename.vbs နဲ့ သိမ်းပါ..ဒါဆို run box ရမယ်။Dim cmd cmd = InputBox(“Type Your Command…eg.>>> cleanmgr”,”Run Command Prompt”,”cleanmgr”) Dim ws Set ws = WScript.CreateObject(“WScript.Shell”) On Error Resume Next ws.Run(cmd) ws.Quitဘာဘာ ဘာမှသိတော့ပါဘူးဂျာ..
Registry ကနေခေါ်မယ်ဆို.ဒီအောက်ကဟာလေးကို ကော်ပီကူးပြီး notepad ထဲဖြည့်.
Filename.reg နဲ့ သိမ်း.။ဒါဆို Registry ကနေပိတ်ထားခဲ့တဲ့ Taskmgr ပြန်ရပြီ..။
Group policy ကပိတ်တဲ့ဟာဆို ဒီတိုင်းသွားပြင်
Run>gpedit.msc>user configuration အောက်က administrative templates မှာ ရှိတဲ့ system အောက်က Ctr+Alt+Del Option မှာ Remove Task Manager ကို Disable လုပ်ပါ။ ပြီး ရင် Run box ထဲမှာ gpupdate ဆိုပြီး group Policy ကို update လုပ်ပါ။ ok..
Group policy ကိုသွားဖို့run box ကိုပိထားသေးရင် ဒီအောက်က Script တွေကို notepad ထဲကူးပြီး..
Filename.vbs နဲ့ သိမ်းပါ..ဒါဆို run box ရမယ်။
cmd = InputBox(“Type Your Command…eg.>>> cleanmgr”,”Run Command Prompt”,”cleanmgr”)
အရမ်းကိုအသုံးတဲ့တယ်ဗျာ။နိုင်ငံထဲမှာလည်း အဲ့လိုတိုးတတ်မှူတွေ ရှိနေပေမဲ့ လူ့စိတ်မရှိ နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ပဲ ပြောနေ
ပြီးတော့ဖမ်းနေကျတာတွေကတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး. . . . ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။
နေ့တိုင်းတနေကုန်ရုံးမှာသုံးနေတဲ့အကောင့် ဟိုတနေ့ကဆိုင်မှာသွားသုံးတော့ လော့ကျနေပီဆိုပဲ မြင်လိုက်တာလန့်တောင်သွားတယ် ဒါတွေကြောင့်ဖြစ်တာထင်တယ်နော်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ခုလိုပြောပြပေးတဲ့အတွက်။ လိုင်းပေါ်မှာ ခုလိုသူများမသိတာလေးတွေကို ပြောပြပေးတာ အရမ်းကိုလေးစားပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ ဒါလေးကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ ၅ လလောက်တည်းက ကြားရပါတယ်။
သေချာလည်း ဂရုတစိုက်နဲ့ သုံးနေရပါတယ်။ အခုလိုပြန်ပြောပြလို့လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြည်တွင်းက သုံးနေတဲ့လူတွေ ကြောက်ပြီး ဆက်မသုံးရဲဖြစ်မှာကိုလည်း စိုးရိမ်မိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆိုင်တစ်ဆိုင်ထဲက စက်တစ်စက်တည်း မသုံးရင် ဘာမှမဖြစ်လောက်ပါဘူး။ လူတိုင်းကိုလည်း သူတို့ ဒီလောက် လိုက်မကြည့်နိုင်ပါဘူး………။နည်းနည်း အနံ့ထွက်တဲ့သူ ဒါမှမဟုတ် နာမည်ကြီးတဲ့သူမှပဲ..သူတို့လုပ်မယ်ထင်တယ်။ အကောင်းဆုံးက ရင်းနှီးတဲ့ ဆိုင်မှာပဲသုံးသင့်ပါတယ။်..။ တစ်နေ့တစ်ဆိုင်ပြောင်းသုံးရင်တော့ အကောင်းဆုံးထင်တယ်။
အခြားဆိုဒ်တစ်ခုမှာ တဆင့်ကူးယူဖော်ပြခွင့်ပြုပါ ဆရာ။
Source ကတော့ http://myatlayngon.blogspot.com/2010/12/blog-post_929.html ပါခင်ဗျာ။
ဟုတ်ကဲ့ပါ… ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုပေါက်ဖော်…